May 2022 - New State
“နိုင်ငံပျောက်သူ” ဇာတ်လမ်းတိုရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ်ပုံရိပ်များမှတ်တမ်း ဒီဇာတ်ကားလေးရိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးကို l ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေများအကူအညီနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီး ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ Emergency roomထဲရောက်သွားပြီး၃ရက်အကြာမှာ ရိုက်ထားတာဆိုတော့ထိုးဆေးစားဆေးတွေအရှိန်နဲ့ ဖောရောင်ဖောင်းကားနေတာလေးတော့သည်းခံကြည့်ပေးကြပါ။ *VPN ချိတ်ပါ *Youtubeဖွင့်ပါ *”နိုင်ငံပျောက်သူ”လို့ရိုက် ရှာပြီးကြည့်ပါ *ကြော်ငြာတက်လာရင်”Skip ad”နှိပ်ကျော်ပြီးဆက်ကြည့်‌ပေးပါဟု ရေးသားထားပါသည်။ နိုင္ငံေပ်ာက္သူ ဇာတ္လမ္းတိုရိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ပုံရိပ္မ်ားမွတ္တမ္း ဒီဇာတ္ကားေလးရိုက္ဖို႔အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးကို l ခ်စ္ခင္ရတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအကူအညီနဲ႕ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ႀကိဳးစားရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ Emergency roomထဲေရာက္သြားၿပီး၃ရက္အၾကာမွာ ရိုက္ထားတာဆိုေတာ့ထိုးေဆးစားေဆးေတြအရွိန္နဲ႕ ေဖာေရာင္ေဖာင္းကားေနတာေလးေတာ့သည္းခံၾကည့္ေပးၾကပါ။ *VPN ခ်ိတ္ပါ *Youtubeဖြင့္ပါ *နိုင္ငံေပ်ာက္သူလို႔ရိုက္ ရွာၿပီးၾကည့္ပါ *ေၾကာ္ျငာတက္လာရင္Skip adႏွိပ္ေက်ာ္ၿပီးဆက္ၾကည့္ေပးပါဟု ေရးသားထားပါသည္။
(ငါပြန်တော့မယ်…..) နင်ပြန်လို့မရဘူး….(why….) လေယာဥ်နဲ့ ဗုံးကျဲလို့ နင်​မနေ့က တည်းက သေသွားပြီလေ
(ငါပြန်တော့မယ်.....) နင်ပြန်လို့မရဘူး....(why....) လေယာဥ်နဲ့ ဗုံးကျဲလို့ နင်​မနေ့က တည်းက သေသွားပြီလေ
“နိုင်ငံပျောက်သူ” ဒီဇာတ်ကားလေးရိုက်ဖို့အခက်အခဲတွေအများကြီးကို l ချစ်ခင်ရတဲ့မိတ်ဆွေများအကူအညီနဲ့ဖြတ်ကျော်ပြီး ကြိုးစားရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ Emergency roomထဲရောက်သွားပြီး၃ရက်အကြာမှာ ရိုက်ထားတာဆိုတော့ထိုးဆေးစားဆေးတွေအရှိန်နဲ့ ဖောရောင်ဖောင်းကားနေတာလေးတော့သည်းခံကြည့်ပေးကြပါ။ *VPN ချိတ်ပါ *Youtubeဖွင့်ပါ *”နိုင်ငံပျောက်သူ”လို့ရိုက် ရှာပြီးကြည့်ပါ *ကြော်ငြာတက်လာရင်”Skip ad”နှိပ်ကျော်ပြီးဆက်ကြည့်‌ပေးပါဟု ရေးသားထားပါသည်။ နိုင္ငံေပ်ာက္သူ ဇာတ္လမ္းတိုရိုက္ကြင္းေနာက္ကြယ္ပုံရိပ္မ်ားမွတ္တမ္း ဒီဇာတ္ကားေလးရိုက္ဖို႔အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးကို l ခ်စ္ခင္ရတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအကူအညီနဲ႕ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ႀကိဳးစားရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ Emergency roomထဲေရာက္သြားၿပီး၃ရက္အၾကာမွာ ရိုက္ထားတာဆိုေတာ့ထိုးေဆးစားေဆးေတြအရွိန္နဲ႕ ေဖာေရာင္ေဖာင္းကားေနတာေလးေတာ့သည္းခံၾကည့္ေပးၾကပါ။ *VPN ခ်ိတ္ပါ *Youtubeဖြင့္ပါ *နိုင္ငံေပ်ာက္သူလို႔ရိုက္ ရွာၿပီးၾကည့္ပါ *ေၾကာ္ျငာတက္လာရင္Skip adႏွိပ္ေက်ာ္ၿပီးဆက္ၾကည့္ေပးပါဟု ေရးသားထားပါသည္။
ရယ်မောတဲ့ Emojiတွေသုံးပြီး စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကို ကိုယ်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျရတယ်
ရယ်မောတဲ့ Emojiတွေသုံးပြီး စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာကို ကိုယ်မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျရတယ် ဒီရက်ထဲမှာ ကိုယ်ပွဲတွေသွားတယ်။ တော်လှန်ရေးအတွက် စကားတွေပြောတယ်။ ဘွန်းရောင်းတယ်။ Fund Raise လုပ်ပေးတယ်။ လူတွေအမြင်မှာ ကိုယ်တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတာ ဝေဝါးနေတဲ့ခံစားချက်ပဲ။ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ ကိုယ်ဟာ ပေးဆပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကို တိုက်ရိုက်မြင်နေရတယ်။ အသက်တွေ၊ ဘဝတွေ၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေ။ ဒါ့အပြင် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကြောင့် ဘဝအပျက်ကြီးတွေကို ထမ်းပိုးပြီး အသက်ရှင်နေရသူတွေ။ ဥပမာ ရွာမီးရှို့ခံရသူတွေ၊ စစ်ဘေးရှောင်တွေ၊ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာပြီး ဘဝကို သုညက ပြန်စနေရတဲ့ မစနိုင်ရှာတဲ့ ကိုယ်အပါအဝင် ဘဝတူတွေ။ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာလည်း Normal Life ထဲ ပျော်ပျော်ကြီး စီးမျောနေကြတဲ့သူတွေ။ မင်းတို့တော်လှန်နေတာပဲ၊ ငါတို့မလိုပါဘူး တွေးနေတဲ့သူတွေ။ တော်လှန်သူတွေနဲ့ နာကျင်မှုတွေရင်းနှီးပြီး ရလာမယ့် ဒီမိုကရေစီကို အခန့်သားယူဖို့ မျှော်လင့်နေကြသူတွေ။ […]
နိုင်ငံပျောက်သူ Short Film အစ/ဆုံး——
နိုင်ငံပျောက်သူ Short Film အစ/ဆုံး------
ရုရှားမှာ ဥပဒေအသစ်တခုကို ပူတင်ကလက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီ မအလ ရော လိုက်လုပ်တော့မှာလား
ရုရှားမှာ ဥပဒေအသစ်တခုကို ပူတင်ကလက်မှတ်ထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီ မအလ ရော လိုက်လုပ်တော့မှာလား ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လိုအပ်ချက်အရ စစ်မှုမထမ်းမနေရ အသက်ကန့်သတ်ချက်ဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ရုရှားအစိုးရက မေ ၂၈ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာပါတယ်။ အရင်က ရုရှားနိုင်ငံသားစစ်စစ်ဆိုရင် အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ အသက် ၄၀ နဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသား ခံယူထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားဆိုရင် အသက် ၁၈ နှစ်ကနေ အသက် ၃၀ အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းသူတိုင်း စစ်မှုမထမ်းမနေရ ပြဌာန်းခဲ့တာပါ။ ခုတော့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ စစ်မှုမထမ်းရသေးသူအားလုံး စစ်မှုထမ်းခွင့်ရဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး အသက်ကန့်သတ်ထားတာတွေကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာလို့ ရုရှားလွှတ်တော်က ကြေညာပါတယ်။ အသက်ကန့်သတ်ချက် ပယ်ဖျက်တဲ့ ဥပဒေကို သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုတာဆိုပါတယ်။ အရင်က စစ်မှုမထမ်းလိုသူတွေဟာ အသက်ကန့်သတ်ချက်ကာလမှာ […]
စစ်ကိုင်းက သူရဲကောင်းတွေ ဒါမျိုးပစ္စည်း သုံးနေရတယ်လို့သိရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို
စစ်ကိုင်းက သူရဲကောင်းတွေ ဒါမျိုးပစ္စည်း သုံးနေရတယ်လို့သိရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆိုတဲ့ ပန်ဆယ်လို စစ်ကိုင်းက သူရဲကောင်းတွေ ဒါမျိုးပစ္စည်း သုံးနေရတာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးမြင်တော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ အောက်က ကောမန့်မြင်တော့ ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ကျွန်မဝန်ခံထားပြီးသားပါ။ ကျွန်မဟာ တော်လှန်သူအားလုံးကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့ စွမ်းအားမရှိပါဘူး။ ကျွန်မ Fund Raise လုပ်လို့ရရှိငွေနဲ့ လက်လှမ်းမှီတဲ့အဖွဲ့တွေကို မျှဝေပေးတာကို အင်အားရှိသမျှ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ကျွန်မမှာ Fund Raise Project အကြီးတွေ လုပ်ပြီးပြီဆို အင်မတန်ခေါင်းကိုက်ရပါတယ်။ Project Dragonfly လိုမျိုး၊ 1 Million Challenge လိုမျိုး Campaign တွေဟာ မစခင်ကတည်းက ပို့ဆောင်မယ့်နေရာတစ်ခုက ရှိပြီးသားပါ။ ဒီလို Project မျိုးတွေဟာ အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ကြတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ထိရောက်မှုရှိသလို တစ်ဖက်မှာလည်း […]
စကစရဲ့ အမြှောက်တပ်ဆိုတာက ကြမ်းတယ် လို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို
စကစရဲ့ အမြှောက်တပ်ဆိုတာက ကြမ်းတယ် လို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို အမြှောက်တပ်ဆိုတာက ကြမ်းတယ်။ ရမ်းထုတာပဲ တတ်တာ။ ဘယ်လောက်ကြမ်းလဲဆိုတော့ PDF နှစ်ယောက်ကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ပိတ်ဖမ်းတာတောင် အမြှောက်တပ်ထုံးစံအတိုင်း ရမ်းထုတာ။ PDF နှစ်ယောက်မထိဘဲ တစ်ကောင်ဒွမ် ခြောက်ကောင်ထိတဲ့အထိ ရမ်းထုရာမှာ ကြမ်းတာ။ ပိုကြမ်းတာက ဒွမ်လည်းဒွမ်ရော အမြှောက်တပ်နာမည်ရော ရာထူးရော ဖယ်ပြီး မသာချလိုက်ရော။ အမြှောက်တပ်ထက်ကြမ်းတာဆိုလို့ ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ဗုံးကျဲနေကျ လေတပ်ပဲ ရှိတော့တယ်။ 😌 စကစရဲ႕ အျမႇောက္တပ္ဆိုတာက ၾကမ္းတယ္ လို႔ ဝန္ခံလိုက္တဲ့ ပန္ဆယ္လို အျမႇောက္တပ္ဆိုတာက ၾကမ္းတယ္။ ရမ္းထုတာပဲ တတ္တာ။ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းလဲဆိုေတာ့ PDF ႏွစ္ေယာက္ကို ဟိုဘက္ဒီဘက္ ပိတ္ဖမ္းတာေတာင္ အျမႇောက္တပ္ထုံးစံအတိုင္း ရမ္းထုတာ။ PDF ႏွစ္ေယာက္မထိဘဲ တစ္ေကာင္ဒြမ္ ေျခာက္ေကာင္ထိတဲ့အထိ […]
သူဟာသူ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကို Vigo ကားပေါ်ကနေ ရဲစစ်သားတွေက သေ န တ်နဲ့
သူဟာသူ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကို Vigo ကားပေါ်ကနေ ရဲစစ်သားတွေက သေ န တ်နဲ့ ထားဝယ်မှာ သူဟာသူ ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့လူငယ်တွေကို Vigo ကားပေါ်ကနေ ရဲစစ်သားတွေက သေ န တ်နဲ့ ပ စ်သ တ်တာ တကမ္ဘာလုံး သိနေတဲ့ video ဖိုင်ကြီး ရှိနေရက် စစ်ဆေးရုံ ဆေးစာထဲမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ ဦးခေါင်းအပြ င်းအ ထန် ဒ ဏ်ရာရဆိုပြီးထုတ်ပြန်လာတဲ့ဆေးစာရွက် ဘယ်လိုမေ့မလဲ…? မြောက်ဥက္ကလာပမှာ ပရဟိတသမားတွေကို ဦးခေါင်းပဲ တခွ မ်းခွမ်း ရို က်ခွဲခဲ့တာတွေ မြောက်ဥက္ကလာပမှာပဲ လူတဦးကို ဆွဲဖမ်းလာပြီး လမ်းမပေါ်ထုတ် ဦးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့တာတွေ … ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ကျောင်းဆရာမကြီးကို ကျောင်းရှေ့မှာပဲ ပ စ်သ တ်သွားတာတွေ လူတယောက် […]
စစ်ကိုင်းဘက် ​အရမ်းဆိုးနေပြီ…ကျနော် အဆင်ပြေပါတယ်…ခင်ဗျားတို့ အဆင်မပြေမှာပဲ စိုးတာ
စစ်ကိုင်းဘက် ​အရမ်းဆိုးနေပြီ...ကျနော် အဆင်ပြေပါတယ်...ခင်ဗျားတို့ အဆင်မပြေမှာပဲ စိုးတာ
စစ်ကိုင်းဘက် ​အရမ်းဆိုးနေပြီ…ကျနော် အဆင်ပြေပါတယ်…ခင်ဗျားတို့ အဆင်မပြေမှာပဲ စိုးတာ စစ်ကိုင်းဘက် အခြေအနေက မြင်ရတဲ့အတိုင်း အရမ်းဆိုးနေပြီ။ တစ်ချို့လူတွေ ဟီးဟီးဟားဟားတွေ လုပ်လို့မဝသေးတာလား? တမင်ရွဲ့ လုပ်နေကြတာလား။ ကျနော်မသိလို့ မေးတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ အမှတ်မရှိတာလား? ပျော်ပျော်ကြီး ခေါင်းငုံ့ခံလိုက်ကြတာလား? ၂ လပိုင်း ၁ရက်နေ့က အပူရှိန်က အခုထိ ပူနေတုန်းနော်။ခင်ဗျားတို့အတွက် အေးချမ်းသွားကြပြီလား။ ခင်ဗျားတို့ အပူမဟပ်တော့ အေးနေတယ်ဆိုရင်လည်း အေးပါစေ။ကျနော် အပြစ်မပြောပါဘူး။ တစ်ခုလေးပဲ မှာချင်တာကခင်ဗျားတို့ တော်တော်အမှတ်သည်းခြေနည်းတာပဲ။အေးချမ်းတဲ့နေရာ ဝန်းကျင်ကနေ အလုပ်တွေအမျာကြီး လုပ်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုချင်တာပါ။ ခင်ဗျားတို့ ရုန်းကန်နေကြရတာလည်း ကျနော်နားလည်တယ်။အပြစ်လည်းမပြောရက်သလို ပြောလည်းမထွက်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ ခိုင်းတာလုပ်ပေးဖို့ ကျနော် မြေပြင်မှာရှိနေတယ်လေ။ ခိုင်းစမ်းပါ။ကျနော့ကို နာနာခိုင်စမ်းပါ။ခင်ဗျားတို့ သွေးတွေ အေးမသွားအောင် နေပေးပါ။သွေးမအေးပါဘူးလို့လူကြားကောင်အောင်လောက်တော့ ပြန်မဖြေပါနဲ့။ကျနော်အားလုံးကိုချစ်တယ်။လေးစားတယ်။ ခင်ဗျားတို့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကားဟွန်းသံအရှည်ကြီးတွေ၊ လက်သုံးချောင်းထောင်ပေးခဲ့တာတွေ၊၂ငါးလုံးမှာ […]
❝ပိုပြီး ကျန်းမာအောင် တည်ဆောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်…❞ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီး ညီသုတ
❝ပိုပြီး ကျန်းမာအောင် တည်ဆောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်...❞ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီး ညီသုတ
❝ပိုပြီး ကျန်းမာအောင် တည်ဆောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်…❞ လို့ဆိုလိုက်တဲ့ CDM ဗိုလ်ကြီး ညီသုတ ဒီရက်ပိုင်း ကျနော်Learning Zone ပြန်ဆင်းပြီး ကျနော့်ကိုယ်ကျနော် Upgrade လုပ်နေတာကြောင့် ဖေ့ဘွတ်သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။ Signal ၊ Telegram နဲ့ Messenger ကနေ Reply လုပ်တာတွေလည်း ကြာနေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့်ရဲ့အချိန်အများစုကို တော်လှန်ရေးအတွက် မြှပ်နှံထားခဲ့တာမလို့ ဒီကာလမှာတော့ ကျနော့်အတွက် Personal Time and space ပြန်တည်ဆောက်ဖို့ လိုနေတာကြောင့် တခြားသူတွေကို အချိန်သိပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် ကျနော်က ၁နှစ်မှာ ၃လလောက် Learnning Zone ပြန်ဆင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အခုက တော်လှန်ရေးကာလဆိုတော့ အဲ့ဒီလောက် အချိန်အကြာကြီး ပြန်ဆင်းဖို့ရာမလွယ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၁လလောက်ပဲ အချိန်ယူပြီး Performance Zone […]